Xeelado fudud oo laga bilaabo Semalt Taasi waxay ka dhigeysaa boggaaga WordPress sida ugu haboon
Internetku wuxuu soo bandhigaa fursado fara badan oo loogu talagalay dadka u shaqeeya dadka badanshabakadaha e-commerce si ay u fuliyaan shaqadooda. Tusaale ahaan, ganacsiyada badankood waxay ku dhaqmaan habka e-commerce, mid ka mid ah oo la yimaada dad badandulsaar iyo hoos u dhac. Tusaale ahaan, goobaha waxay ku xiran yihiin khayaanada. Hackers waxay isku dayaan inay ciriiri galiyaan siyaabo badan, taas oo u sahlaysaiyaga si ay u helaan galaangal aan loo fasaxin oo dukaamada e-commerce kala duwan iyo sidoo kale helitaanka macluumaadka macaamiisha ku habboon. Si aad uga badbaaddohanjabaadaha internetka, waxaad u baahan tahay inaad fahamto sida ay u shaqeeyaan - proveedor alojamiento web.
WordPress waa habka ugu maareynta maareynta maadooyinka. Tusaale ahaan, WordPresswuxuu leeyahay ilaa 24% dhammaan shabakadaha internetka ee caalamka. Waxay leeyihiin arrimahan oo ay ugu wacan tahay arrimo badan, kuwaas oo u muuqda in ay jecel yihiin qaabkoodii ganacsiga.WordPress wuxuu leeyahay qalab badan iyo plugins kaas oo awood u siinaya isticmaalayaasha in ay automate badan farsamooyinka suuq-geynta SEO iyo internetka. Si kastaba ha noqotee, dad badanIsticmaal WordPress si aad u hesho boggooda baahida, hackers iyo hanjabaado internetka kale waxay u helaan WordPress dahab dahab ah. WordPress waa la yaqaan oo dhakhso, taas oowuxuu ka dhigayaa jajabinta ama qaar ka mid ah ekooyinka ay fududahay. Kacbiyuutar wuxuu u heli karaa macluumaad badan oo ka socda goob kasta iyada oo aan ogolaansho milkiile.
Oliver King, Sare Maareeyaha Guusha Macaamiil, wuxuu soo bandhigayaa talooyinka soo socda si loo wanaajiyo ammaanka WordPress marka la samaynayo goobta:
Isticmaalida qalabka kombiyuutarka ee ammaanka leh ayaa kumbuyuutarku ka dhigan karaa gooryaan iyo fayrasyo ​​badan..Waa muhiim inaad hubiso in barnaamijka mashiinkaagu yahay barnaamijka saxda ah iyo hubinta inay qabtaan shaqadooda dhabta ah. Fadlantirtirso isla markiiba barnaamij kasta oo xaasidnimo ah asal ahaan aan lagugu garanayn. Tallaabooyin isku mid ah ayaa lagu dabaqaa daalacashada sidoo kale. Ha ogolaanin waxplugin si ay ugu ordo bartaada. Waxay ku jiri karaan qoraallo, kuwaas oo wax ka bedelaya kombuyuutarkaaga.
Iska ilaali spam iyo phishing
Ha ku dhejin link kasta ee boostada spam. Xiriiriyeyaashani waxay fuliyaan qaar ka mid ah iskutallaabta caadiga ahweerarrada goobta. Waxay sidoo kale ku jiri karaan lifaaqyo, kuwaas oo leh Trojans. Habka caadiga ah ee ganacsadaha ganacsadaha ah ayaa badanaa ku dhajinaya liis ay ku qoran yihiin adukumiintiga ereyga, kaas oo leh Trojans. Maadaama iibsadaha faraxsan uu furo feylka si uu u arko waxyaabaha uu ka kooban yahay, wuxuu soo bandhigayaa fayruska oo dhankombuyuutar. Dad badan ayaa lumiya macluumaadka qiimaha leh habkan. Furaha sirta ah ayaa sidoo kale samayn kara macaamilo been abuur ah oo badansida lacagta la dhaqay.
Marka aan naqshadeyno boggaga intarnetka, khibradda isticmaalaha, iyo sidoo kale goolka ugu dambeeyo, waa caadi ahaanujeedadeena. Qaar badan oo ka mid ah boggaga internetka ayaa diirada saaraya SEO-ga iyo samaynta macaamil ah iyada oo loo marayo habka iibsashada ee fudud. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku guuldareyneynaa in aan wax ka qabanoee maskaxda lagu hayo. Natiijo ahaan, waxaa jira in ka badan 90987 weerarrada hack oo dhacaya daqiiqad kasta oo ka badan domains WordPress. Waa muhiim inaadBaro habkan iyo sidoo kale sameynta boggayaga internetka oo aan ku dhejino caddayn. Waxaad samayn kartaa boggaaga si aad u ahaato mid ka mid ah hacks-ka fudud ee WordPresssida afduubka sirta ah iyo sidoo kale iskudayada kale ee hackka isticmaalaya hagahan. Ammaanka boggaaga iyo kan macaamiishaada ayaa joogi karajeeg. Waxaa intaa dheer, shabakad amaan ah waxay si fiican u qabataa SERPs samaynta dadaalka SEO iyo dadaalka suuqgeynta miraha.